110 Mivavaka momba ny fahatapahana ara-bola | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka 110 Mivavaka momba ny fahatapahana ara-bola
110 Mivavaka momba ny fahatapahana ara-bola
Tian'Andriamanitra hotahina amin'ny zava-drehetra ny zanany rehetra. Izany no antony nandefany antsika an'i Jesosy Kristy zanany. Tamin'ny alàlan'i Kristy, dia nahazo fitahiana ara-panahy rehetra isika any amin'ny toerana any an-danitra. Ny antony 110 manasongadina ny vavaka Famotsorana ara-bola ? Izany dia mba hanampiana antsika hirotsaka amin'ny ady ara-panahy handraisana izay efa nomen'Andriamanitra ho antsika ao amin'i Kristy Jesosy.
Inona no atao hoe Fitahiana? Inona no dikan'ny hoe voatahy amin'ny maha kristiana azy? Ny hoe mahazo fitahiana dia midika fotsiny hoe ekena ara-panahy sy eken'Andriamanitra. Izany no dikan'ny hoe voatahy. Midika izany fa voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao ary mpilatsaka antoka azo antoka ny lanitra ianao. Ny vola tsy midika hoe fitahiana, olona marobe no mandre ny tso-dranonao amin'ny amin'ny zavatra ara-nofo anananao. Jesosy dia nilaza fa ny olombelona dia tsy refesin'ny fananany. Ny fitahiana dia mety misy vola, fa tsy refesina amin'ny vola izany.
Betsaka ny tsy mpino izay manankarena nefa tsy voatahy, na dia mpanao ratsy maro aza dia samy manankarena, saingy tsy voatahy izy ireo satria tsy fantatr'Andrimanitra ireo. Hitantsika koa ao amin'ny Baiboly ilay adala manankarena, izay maty tsy nahalala an'Andriamanitra, dia hitantsika koa ny tantaran'ilay lehilahy mpanankarena sy Lazarosy izay maty koa ary lasa nankany amin'ny helo. Ankoatr'izay dia nohazavain'i Jesosy fa mety hahazo izao tontolo izao ny olona iray kanefa mbola very ny fanahiny amin'ny devoly. Moa ve manohitra ny vola isika?, Mazava ho azy fa tsy ny fanomezan'ny famonjena ny aintsika aloha alohan'ny vola na fitahiana ara-bola.
Inona ny fanaparitahana vola? Izany dia rehefa voatahy amin'ny asan'ny tananao ianao, dia midika koa izany fa voatokana miaraka amin'ireo fitaovana eto amin'ity tontolo ity ianao. Tian'Andriamanitra hahazo aina tsara ny zanany rehetra. Amin'ny maha mpino anao, dia liana amin'ny fioam-bolanao ara-bola Andriamanitra. Saingy misy zavatra tsy maintsy ataonao mba hitahiana ara-bola. Misaora an'Andriamanitra noho ireo fahatapahan-kevitra 110 ho an'ny fahatapahana ara-bola ity, saingy mandra-pahafantaranao ny fitsipika sasany dia tsy afaka manampy anao ny vavaka.
3 Zavatra ara-batana izay tsy maintsy ampianarinao mba hahazoana fitahiana ara-bola.
1). Fananganana trano sy fahaiza-manao ho an'ny mpandraharaha
2). Ny fahaizan'ny fitantanana ara-bola manokana
3). Fahaiza-manao fampanjariam-bola
4). Aoka ianao ho Mpanome (na amin'Andriamanitra na amin'ny fiantrana).
Tsy maintsy manangona fotoana sy vola hifehezana ireo fahaiza-manao eo ambony ianao, raha te hanan-karena. Tsy maintsy mianatra manao izay hataon'ny manankarena ianao, mba hanan-karena. Rehefa miasa amin'ireto zavatra ireto ianao dia lasa mahomby kokoa ny vavaka ataonao amin'ny fidiram-bola. Rehefa manokatra varavarana ho anao Andriamanitra, dia ho vonona tsara hanatsarana izany ianao.
1. Ry Tompo ô, manorata ahy ho mpanome be dia be, enga anie tsy hiady mafy aho hamerina anao sy ny fiarahamoniko amin'ny anaran'i Jesosy.
2. Tompo ô, hitahy ahy be aho mba ho lasa mpamatsy vola lehibe amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Tompo ô, omeo ahy ny hevitra ambonimbony mba hahatonga ahy ho goavambe amin'ny fotoanako amin'i Jesosy.
4. Ray ô, amin'ny tananao mahery, sokafy varavarana ara-bola ho ahy izay hahatonga ahy goavam-bola amin'ity firenena ity amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Ry Tompo, araka ny Isaia 60, dia nilaza ianao fa na dia teo afovoan'ny aizina aza, hamirapiratra ny fahazavako, nahatonga ahy hampiakatra be tokoa i dada eo afovoan'ny fandoroana ara-toekarena ao amin'ny fireneko amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Oh Tompo hanome ahy ny fahaizan-tsaina takiana mba handika ny fotoana rehetra izay tonga eo amin'ny làlako ary manararaotra azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.
7. Mahazo fahasoavana aho mba hankafy harena izay maharitra mandritra ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Ambarako fa tsy afaka amin'ny trosa ratsy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aho.
9. Mahazo fanafahana tanteraka aho avy amin'ny fanalam-baraka mahamenatra mandondòna eo am-baravarana ary antso an-telefaona imbetsaka mangataka fanampiana ara-bola amin'ny anaran'i Jesosy.
10. Mahafantatra ny hafainganam-pandeha avy amin'Andriamanitra aho amin'ny fikatsahako ny fahalalahana ara-pivavahana amin'ny anaran'i Jesosy.
11. Nambarako fa tsy hanapaka ahy eto amin'ity fiainana ity ny vola, handoa vola aho, hifehezana ny vola ary hiteraka vola ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Tsy mandà ny enta-mavesatra amin'ny mpiara-monina amiko, ny fianakaviako ary ny namako aho. Izaho dia mpampindram-bola fa tsy mpampindram-bola sy mpangataka amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Rehefa mila ny fanampiako ny sahirana dia tsy ho foana ny kitapoko. Vonona aho hamonjy ny filan'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Tompo ô, afaho aho (ny vadiko, ny zanako sns) amin'ny fanandevozana ny faniriana ratsy / fahazarana ratsy izay manala ny fitantanam-bola amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Hovokisan'ny Tompo ny zavatra tsara; Hanana vola hihinana sakafo voafidy aho ary hahavita zavatra lehibe amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Mahazo fanafahana tanteraka aho noho ny ozona sy ny fahantrana izay tonga hatramin'ny fianakaviamben'ny fianakaviako. Hiaina mamindra ny fahombiazana ho an'ny taranako amin'ny anaran'i Jesosy aho.
17. Tsy hoe hanan-karena fotsiny aho fa manana anarana lehibe ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy.
18. Avelao ny Fanahinao hanome hery ahy ry Tompo, hahatratra sy hanohana ary hankafy fahombiazana amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Hitombo ny fifaliako amin'ity faran'ity volana ity, noho izany dia isaiko ny fitahiana fa tsy ny alahelo amin'ny anaran'i Jesosy.
20. Tompo ô, manafaka ahy amin'ny asa tsy mamoa sy ny hetsika mikorontana ao amin'ny anaran'i Jesosy.
21. Tsy handao ny taranako aho. Hotarihiko avy amin'Andriamanitra ny hamboleko ny voa amin'ny tany mahavokatra amin'ny anaran'i Jesosy.
22. Tompo ô, avelao ny loharano ilaina hanatanterahana ny nofinofiko eo am-pelatanan'ny fahavaloko, avoaka amin'ny afo ary averina ao amin'ny fitandreman'ireo namako sy mpanampy ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
23. Tompo ô, avelao ny vola hijanona ho mpitondra hafatra tsy mivadika amin'ny anaran'i Jesosy ihany.
24. Ny fanampiana avy any ambony sy any ivelany dia hanambatra ary hifaninana hahay handoa ny volako ary hahatanteraka ny nofinofiko amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy.
25. Manomboka izao ny fampiasam-bolako sy ny fiasako rehetra hatramin'ny nanombohan'ny asako sy ny ministerako dia hanomboka hanome ny tombony feno amin'ny anaran'i Jesosy
26. Amin'ny toe-javatra henjana rehetra, avelao ny ampahafoloko handroso vahaolana avy any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy.
27. Amin'ity herinandro ity, dia hamoaka fahagagana mahafinaritra amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanako taloha.
28. Mandritra ity taona ity, tsy misy ny loharanom-bolako rehetra tsy ho lany tamina volavolan-dalàna ara-pitsaboana na izay mety ho tombom-barotra tsy mahasoa amin'ny anaran'i Jesosy.
29. Tsy hahazo ny dikan'ny lanitra i Satana handroaka ny haren'ny fananako amin'ny ratsy
30. Izay rehetra mitady ahy fanampiana amin'ity taona ity dia tsy ho diso fanantenana. Ampy ahy ny hanome fahafaham-po ny filako sy ny fanomezana betsaka ho an'ny hafa izay mila ny anaran'i Jesosy.
31. Mahazo fanafahana amin'ny fatoran'ny fisalasalana aho ary matahotra fa ny tsy fahombiazana taloha sy ny fahoriana dia nampiditra ny fiainako tamin'ny anaran'i Jesosy.
32. Mahazo herim-po ilaina aho mba hidirany amin'ny fahalehibiazana notendren'Andriamanitra ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
33. Manaiky ny fitarihan'ny Fanahin'Andriamanitra aho ary mahazo mitarika ny lanitra handrava ary hahomby amin'ny asako rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
34. Mahazo endrika tsara tarehy avy amin'Andriamanitra aho, noho izany dia hanaiky ny ataoko rehetra ny lanitra ary hiroborobo eo an-tanako ny sitrapon'Andriamanitra.
35. Manda ny handresy ny herimpo aho amin'ny fahasosorana. Handefasa fampaherezana aho anio; Hahazo hery aho hanohizana ny hazakazaka amin'ny anaran'i Jesosy.
36. Ny masoandro miposaka anio milaza ny vanim-pahombiazako sy hanatanterahako ny tanjoko amin'ny anaran'i Jesosy.
37. Ireo izay mino ahy ary efa nametraka ny nofinofiko, ny fampaherezana ary ny fanohananay dia tsy ho diso fanantenana amin'ny anaran'i Jesosy.
38. Avelan'ny Tompo hivoaka ny toe-javatra ratsy rehetra izay mampifangaro ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
39. Avelao ny hery ara-paminaniana izay miasa ao amin'ny lohasaha taolana maina hampiray amiko amin'ny fatiantoka (voninahitra, mpanampy, vady, vady, zanaka, fifaliana sns) amin'ny anaran'i Jesosy.
40. Ny toe-tsaina rehetra momba ny tsy fankatoavana sy ny fanahy demonia izay mampiroborobo ny fananana eo amin'ny fiainako dia tapitra ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
41. Ireo misalasala ny fahaizako fahombiazana dia ho olom-peheziko amin'ny anaran'i Jesosy.
42. Ireo mandà tsy handoa amiko mandritra ny fotoanan'ny fahoriako dia tsy ho ela dia hanomboka hiantehitra amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
43. Ireo izay mihomehy ahy androany dia hihomehy ahy tsy ho ela ary hanenina noho ny hadalany ny mijery ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
44. Ireo izay mivory mba hanakorontana ny fahitako dia mangataka ny ho anisan'ny fankalazako amin'ny anaran'i Jesosy.
45. Ny fanoherana rehetra sendraiko anio dia ho lasa toko iray momba ny fahombiazako amin'ny anaran'i Jesosy
46. ​​Hamoaka ny firoboroboana amin'ny fiainako ny Tompo izay hitelina ny tantarako fahantrana amin'ny anaran'i Jesosy.
47. Hanome anarana vaovao sy famantarana vaovao aho izay handevina ny tantara ratsy rehetra mifandraika amin'ny fiaviako amin'ny anaran'i Jesosy.
48. Ny fiainako vaovao ao amin'i Kristy dia hitafy fitafiana fahamarinana; tsy hanimba na hampahatahotra ahy amin'ny anaran'i Jesosy intsony ny fiainako mpanota taloha.
49. Ny fahasoavana mitovy amin'izany izay nahatonga an'i Jabez ho mendri-kaja mihoatra noho ny rahalahiny dia hanavaka ahy amin'ny mitovy amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
50. Androany no nanamarika ny fiverenako. Haverina amin'ny laoniny ny fiainako ara-panahy ary ho sitrana tanteraka ny voninahitro very.
51. Nambarako ny departemanta rehetra tamin'ny fiainako teo ambany fifehezan'i satana voahodina amin'ny anaran'i Jesosy.
52. Ambarako fa voavonjy amin'ny fahazarana mpanota rehetra aho izay mitazona ahy ho mpanompo ara-bola ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy.
53. Amin'ny faritra rehetra naharesy ahy ny olona, ​​avelao ny famindram-ponao hanjaka amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
54. Amin'ny faritra rehetra mety hahamenatra ahy ny vola, avelao ny famindram-ponao hampiakatra olona manana hery hahasoa ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
55. Amin'ity herinandro ity aho dia hahita ny famindrampon'Andriamanitra fa hamarana ny olana rehetra amin'ny vola miaraka amin'ny fianakaviako amin'ny anaran'i Jesosy.
56. Ny famatsiana tsy ampy dia tsy hanery ahy handao an ’Andriamanitra. Ny famatsiana tafahoatra dia tsy hamitaka ahy tsy hifandray amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy.
57. Mahazo an'i Kristy Fanahy faharetana aho mba hiaretana ny fotoan'ny fotoam-pahoriana ary miandry ny vanim-potoana hiroborobo amin'ny anaran'i Jesosy.
58. Ny fahoriana ankehitriny dia tsy haharitra mandrakizay; tsy hilentika amin'ny famitrandrahana ara-toekarena mitohy ny asako. Ny Fanahin Andriamanitra dia hitondra amin'ny vanim-potoana vaovao miroborobo amin'ny anaran'i Jesosy.
59. Ny faneken'Andriamanitra an-tsitrapo toy ny teo amin'ny tany Goshen dia hiasa ho ahy amin'ny fanoherana ny fitohizan'ny toekarena mitohy amin'ny anaran'i Jesosy.
60. Na inona na inona tanjona tsara alohako, dia ho azoko satria ny Fanahin'Andriamanitra no hampianatra ny diako mankany amin'ny lalana mahitsy amin'ny anaran'i Jesosy.
61. Noteneniko ny toe-tsaina tsy misy dikany avy amin'ny asako; Hamokatra sy hahasoa ny asa aman-draharaha ataoko amin'ny anaran'i Jesosy.
62. Ny Fanahy Masina no manamboninahitra ambony tsy azo resena amin'ny asan'i Jesosy amin'ny anarany.
63. Tsy hanam-pananana na hevitra kely akory aho hitondrako ny raharahako amin'ny ambaratonga manaraka amin'ny anaran'i Jesosy.
64. Ny Fanahin'Andriamanitra dia handroaka sy handroaka ny Achan (mpamadika) rehetra amin'ny mpiara-miasa amiko izay manam-pitiavana hanimba ny asako eo amin'ny anaran'i Jesosy.
65. Ny Fanahin'Andriamanitra dia hanafaka ahy tsy hanao fahadisoana amin'ny fitadiavam-bidy izay mahay mamily ny asako amin'ny anaran'i Jesosy.
66. Ny Fanahin'ny fahalavorariana, ny fanoloran-tena, ny tsy fivadihana ary ny fahitsiana dia manery ny mpiasa rehetra ao mba hiasa ho an'ny fandrosoan'ny orinasa amin'ny anaran'i Jesosy.
67. Tsy ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy ny fikasan-dratsy sy fanamboarana ireo mpifaninana amiko.
68. Ny fitaovam-piadiana rehetra tohanan'ny fianakavian'ny mpianakavy na ny namana hanimba ny asako
mahomby amin'ny anaran'i Jesosy.
69. Mivoatra ny fanambinana tsy mihetsika aho amin'ny tetikasa rehetra ataoko ao amin'ny anaran'i Jesosy.
70. Satria ny fiaraha-miasa dia miorina miaraka amin'Andriamanitra, izy io dia hamaka midina, mivoatra ho sampana ary hamoa voa ambony amin'ny anaran'i Jesosy.
71. Mandidy ny famerenam-bidy sy famerenam-bola tanteraka ny trosa rehetra avy amin'ny orinasako amin'ny anaran'i Jesosy.
72. Ny tolo-kevitro efa nanadino hatrizay dia hanomboka handinika ny fahefana sy sahaza amin'ny anaran'i Jesosy.
73. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia mameno ny orinasa, ny birao sy ny fivarotako amin'ny anaran'i Jesosy.
74. Na ny maha-orinasa ahy sy ny karatra mahavelona ahy dia hitondra ny fanatrehan'Andriamanitra ary hahasarika ny mpanjifako, ny mpanjifany ary ny fifanarahana amin'ny anaran'i Jesosy.
75. Manafoana ny lalàna rehetra eo an-toerana sy iraisam-pirenena izay tsy ankasitrahan'ny firoboroboan'ny asako amin'ny anaran'i Jesosy.
76. Ny toeram-pandraharahako dia tsy hahazo fitsidihan'ny demonia ny jiolahy sy ny basy mitam-piadiana; Ireo mpampihatra lalàna izay nanohana ahy dia tsy hahomby amin'ny fangatahana ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
77. Ny fiaraha-miasa izay manimba ny asako dia tsy hahazo ny fankatoavako amin'ny anaran'i Jesosy.
78. Ny mpandraharaha amin'ny haizina amin'ny asa ratsy manoloana ny asako dia hahazo ny didim-pitsaran'Andriamanitra ny fahajambana amin'ny anaran'i Jesosy.
79. Ny politikam-pampandrosoana eto amin'ity firenena ity dia hanomboka mankasitraka ny firoboroboan'ny asako amin'ny anaran'i Jesosy.
80. Ny fahitan'ny Governemanta amin'ny fahefana no tsy hanelingelina ny firoboroboan'ny raharahako amin'ny anaran'i Jesosy.
81. Hanosotra ahy Tompo hanapotika tsy misy tsolotra amin'ny anaran'i Jesosy.
82. Hofoanan'ny afo ny Fanahy Masina daholo ny tady sy satra rehetra izay manodidina ny entako voafandrika diso; ny lanitra dia hiaro ny famotsorana azy ireo amin'ity herinandro ity amin'ny anaran'i Jesosy.
83. Mamaha ny mpanjifako sy ny mpanjifako rehetra izay mifatotra manodidina ny apetran'ireo mpifaninana amiko amin'ny fanodinana demonia amin'ny anaran'i Jesosy.
84. Ny entana rehetra izay tafahoatra tao amin'ity tranombarotra ity sy atahorana ho lany daty dia hitondra vola sy hamindra ny mpampiasa azy (mpanjifa) amin'ny anaran'i Jesosy.
85. Ity volana ity dia hanao sonia fifanarahana iray aho izay handoa ny trosako rehetra ary hamela ahy amin'ny be loatra ka mahatonga ahy tsy hanana na inona na inona amin'ny trosa intsony amin'ny anaran'i Jesosy.
86. Amin'ity volana ity, hiala amin'ny trano hofan-trano ho an'ny tompona trano ny tranombahako
fananana amin'ny anaran'i Jesosy.
87. Amin'izay dia tsy hisambotra aho handoa ny mpiasa ao amin'ny anaran'i Jesosy intsony.
88. Ny orinasako dia ho ampy handoavana ny volako, mandoa ny mpiasa sy ny mihoatra fa mila mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiaraha-monina amin'ny anaran'i Jesosy.
89. Mahazo fanampiana avy any ambony aho hanangana ny fianjerako, ary hanitatra sy hanatsara ny fiainako miroborobo amin'ny anaran'i Jesosy.
90. Tsy hanan-kevitra hamoronana hevitra aho mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifako / mpanjifako amin'ny anaran'i Jesosy.
91. Ireo mpanjifa rehetra izay nenjehiko taloha nefa tsy mahomby dia hanomboka hangataka orinasa amiko amin'ny anaran'i Jesosy.
92. Ny fianjeran-karena ara-toekarena ankehitriny dia tsy hanakotra ny asako amin'ny anaran'i Jesosy.
93. Ny herin'ny fitarihan'ny Fanahin'Andriamanitra dia hamono ny fanahin'ny fako sy ireo mpanary fako hiala amin'ny asako amin'ny anaran'i Jesosy.
94. Ny rivotra mahagaga avy amin'ny Andriamanitra dia hametraka harena ao amin'ny asako amin'ny anaran'i Jesosy.
95. Ny Fanahin'Andriamanitra no hitarika ny fanapahan-kevitro; ny renivohitra dia tsy hofehezina amin'ny entana tsy mahasoa amin'ny anaran'i Jesosy.
96. Ny vokatra very ny tsenan'ny tsena, ny mpanjifa manandrana sy ny fahazotoana dia tsy hatsangana amin'ny fivarotako amin'ny anaran'i Jesosy.
97. Ny Fanahin'Andriamanitra dia hanohitra ahy tsy ho voarindra na hokapohin'ireo mpanao hosoka (419) hanafoana izay rehetra efa nisasarako tamin'ny anaran'i Jesosy.
98. Tsy ho voafitaky ny fitsiriritana sy ny fitsiriritana ny tsy fankatoavako ny fampitandremana any an-danitra amin'ny alàlan'ny nofy sy ny faminaniana amin'ny anaran'i Jesosy.
99. Tsy misy navoakan'ny asako ny firaketana an-tsokosoko fanafihana mitam-piadiana na lozam-piadiana amin'ny anaran'i Jesosy.
100. Ny filankevitry ny lanitra ambony indrindra dia hamàka, hanodina ary hanova ny didim-pitondrana rehetra, politika, izay misy fiantraikany amin'ny asako, izy ireo dia hamadika izany amin'ny fankasitrahako amin'ny anaran'i Jesosy.
101). Manapa-kevitra aho fa ny asako dia hifindra amin'ny firenena mankany amin'ny iraisam-pirenena amin'ny anaran'i Jesosy.
102). Manapa-kevitra aho fa hifandray amin'ny teknolojia ireo orinasan-dry zareo izay hahatonga azy ho mpandraharaha an'arivony tapitrisa dolara amin'ny anaran'i Jesosy.
103). Manapa-kevitra aho fa na manankarena aza aho, tsy hitondra ny toeranao eo amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy intsony ny vola.
104). Ray no ambarako fa manana saina tsara aho, noho izany ny IQ ara-bola dia mahomby amin'ny anaran'i Jesosy.
105). Ambarako fa amin'ny alalan'ireto orinasa ireto, olona an'arivony no hahita asa mahasoa amin'ny anaran'i Jesosy.
106). Ambarako fa ny lalan'ny varotra iraisam-pirenena dia misokatra ho an'ny mpandraharaha amin'ny anaran'i Jesosy.
107). Dada Ray tahaka ny nahatonga an'i Isaka manankarena sy matanjaka, ampanjary hanankarena sy matanjaka amin'ny fiainako ny anjarako sy ny orinasako amin'ny anaran'i Jesosy.
108). Ray amin'ny alàlan'ity orinasam-pifandraisana ity dia avelao hiparitaka manerana an'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy ny Filazantsaranao.
109). Navelan'i Dada ho fitaovana lehibe ho an'ny Kristiana ny an'izao tontolo izao amin'ny asan'i Jesosy.
110). Ray ô, Ianao no Mpanome harena be dia be, misaotra anao namaly ny fivavahako androany tamin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraFamakiana Baiboly anio Oktobra 20 Oktobra
Next lahatsoratraVavaka fanafahana amin'ny trosa ara-bola
Jacquelyn. Jade Jones March 17, 2020 Ao amin'ny 12: 48 am
Mpitandrina Chinedum! Izaho no fomba fampianaranao sy fomba fiasa mivantana momba ny Soratra Masina. Tonga teny amin'ny tranom-bavaka Isan'andro aho. Rehefa avy nandalina ny Baibolinao aho dia tena lasa mieritreritra sy misaintsaina ilay teny. Halako fa tsy nahafantatra anao aho taona maro lasa izay satria mahatonga ahy hitahy anao sy ny hafa koa. Manantena ny fampianaranao mazava sy malefaka kokoa aho. Andriamanitra hitahy anao sy hiaro anao ho mafy orina sy ho akaiky azy. Miandrandra lahatsoratra maro kokoa. Misaotra anao!
20 Ny laharam-bavaka dia miady amin'ny tsy fahombiazana sy ny fahombiazana
40 Ireo laharam-bavaka manafaka Fizarana 1
Desambra 20, 2018
Vavaka Hanoherana ny Fahavalon'ny fandrosoana
Desambra 10, 2018